Chọọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi maka Q3 2015 Na-egosi Mgbanwe Mgbanwe | Martech Zone
Chọọ Mgbasa Ozi Mgbasa maka Q3 2015 Na-egosi Mgbanwe Mgbanwe
Fraịde, Ọktọba 16, 2015 Fraịde, Ọktọba 16, 2015 Douglas Karr
Kenshoo si ndị ahịa na-eme mkpọsa ahịa dijitalụ na-agba ọsọ n'ihe karịrị mba 190 ma gụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke Fortune 50 gafee 10 netwọọdụ mgbasa ozi mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ. Nke ahụ bụ ọtụtụ data - ma nwee ekele na Kenshoo na-ekerịta data ahụ na anyị na otu ụzọ n'ụzọ anọ iji hụ mgbanwe ndị na-agbanwe agbanwe.
Ndị ahịa na-adabere na ngwaọrụ mkpanaka karịa oge ọ bụla, ndị ahịa ọkaibe na-agbaso ya na mkpọsa kachasị elu nke na-eweta nsonaazụ ọma na ma na-akwụ ụgwọ na-elekọta mmadụ ma ọchụchọ. Chris Costello, Onye isi nyocha ahịa ahịa maka Kenshoo.
Ọ bụghị naanị mmụba mkpanaka na-agbanwe dị iche iche n'afọ a:
Mgbasa ozi mgbasa ozi ihe ngosi belatara 36% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga ebe clicks belatara 75% yana mkpokọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya mụbara 174%.
Searchgwọ Mgbasa Ozi idgwọ ihe ngosi mụbara 3% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga ebe clicks mụbara 16% yana ọnụọgụ pịa-elu mụbara 12%.
Ekwentị Mgbasa Ozi mmetụta mụbara 73% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga ebe clicks mụbara 108%. N'ezie, mkpokọta ekwentị na-emefuwanye nnukwu ego 69% ebe mmefu desktọọpụ na mbadamba ụrọ dị larịị.
Ihe ọzọ na-atọ ụtọ, n’uche m, ọ bụ mbelata ego ọ bụla ịpị na ịpịkwu ọnụ ọgụgụ ka ịba
Kenshoo bipụtara usoro maka ikpokọta Mpaghara Asia Pacific Japan yana Europe, Middle East na mpaghara Africa.
Tags: 2015americaskenshoommefu mgbasa ozi mkpanakaakwụ ụgwọ mmefu mgbasa oziakwụ ụgwọ ọchụchọ mgbasa ozi akwụ ụgwọq3 2015na-emefu ego kwa ọnwachọọ usoro mgbasa oziNchọgharị mgbasa ozi ọchụchọelekọta mmadụ mmefummefu mgbasa ozi ọha na ezemgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi na-emefu ego
Douglas Karr Friday, October 16, 2015 Friday, October 16, 2015
Otu esi eme ka otutu ihe nke AdWords Conversion Reporting
Ihe kpatara mmụta ji bụrụ ihe ntinye n'ọrụ maka ndị na-ere ahịa